ကားကိရိယာ - Earldom
သင်အဘို့အညာဘက်အရပျ၌ပါပဲ ကားကိရိယာ.ယခုအချိန်တွင်သင်ရှာဖွေထားပြီးမည်သည့်အရာကိုမဆိုသင်တွေ့ရှိရန်သေချာသည် Earldom.ကျနော်တို့ကဒီမှာပေါ်မှာကြောင်းအာမခံပါသည် Earldom.
ဒီဇိုင်းဒီဇိုင်းသည်အထူး, ထူးခြား။ ထူးခြားသောအရာတစ်ခုခုကိုမွေးဖွားသည်။.
Earldom စိတ်ကြိုက် VenDom FM ထုတ်လွှင့်သူ Bluetooth Bluetooth Bluetooth Bluetooth bluetooth bluetooth bluetooth bluetooth bluetooth bluetooth bluetooth 5. MP3 Play Plps QC3.0 QC4.0 5a Fast Charger Auto FM Medulator ထုတ်လုပ်သူများ,Earldom Bluetom FM Transmitter Bluetooth Bluetooth bluetooth bluetooth bluetooth 5.0 Handsfree Car Kit PPS QC3.0 QC4.0 5a Fast Charger Auto FM modulator ပေးသွင်းသူသည်ကြွယ်ဝပြီးကွဲပြားခြားနားသည်။
Earldom Outdoor Stereo သည် Bluetooth Lk3 စပီကာများ
စပီကာ Lk3 ။
Earldom Mirracet Wifi Display Dongle Miascreen W3 Dongle Miascreen W3 Dongle WiFi Display Android TV Dongle Youngle WiFi Display Android TV Dongle android tv dongle,ဤကြိုးမဲ့ display dongle ၏ HDMI Port သည် 1080p ဗီဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုနှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားသောအသံထွက်ရှိမှုကိုထောက်ခံသည်။ သင်သည်စမတ်ဖုန်း, မှတ်စုစာအုပ် Mac သို့မဟုတ် iPad ကိုတီဗွီ, ပရိုဂျက်တာသို့မဟုတ်မော်နီတာသို့ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ သင်၏မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များပေါ်တွင်သင်မြင်သမျှမြင်သမျှကိုကြည့်ရှုရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။
cable cable flowfic glow data cable cable များ cable များ cable များ cable lum cable luminous ဒေတာလိုင်းအီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများကိုလက်ကိုင်ဖုန်းအတွက် ULD
Cable Cablefic Glow Data Cable Cable cable များကို cable cable flow data cable cable ကို cable fable lum cable luminous data line electronics သည်မိုဘိုင်းဖုန်းပေးသွင်းသူ,
5V USB charger socket switch ကို STOMP,4USB port universal offlet, OEM / ODM ဒီဇိုင်း, Power Strip Surge Protector ကိုထောက်ပံ့ပါ
အမှုပေါင်း - 03
Earldom အကောင်းဆုံးအမှု - 03 ကုမ္ပဏီ - Earldom
Earldom အကောင်းဆုံး Eyldom Eh129 ကားဖုန်းခေါ်ဆိုသူ iPhone 12 11 Pro Max X78 Plus Plus Plus2+ Xiaomi ကုမ္ပဏီ - Earldom, အမှတ်တံဆိပ်စျေးနှုန်းများသည်ကောင်းမွန်သောစျေးနှုန်းချိုသာစွာရှိနိုင်သည်။
Earldom Cellphone Mount Holder နှစ်ယောက်အခြေပြုမိုဘိုင်းဖုန်းကိုင်ဆောင်သူ Cholder Cholder Cholder Cholder Cholder Cholder Cholder Cholder charger
Earldom အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးရှိသော Earldom Cellphone Mount Holder Double Base Phone Car Holder Carder Cholder Cholder Cholder Cholder Charger Cholder Charger Charger Charger Charge Pre-Sale နှင့်အရောင်းအ0ယ်ဆောင်ခြင်း။
အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးရှိသော Earldom 60w အမြန်နှုန်းမြန်နှုန်းကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်အားသွင်းခြင်း USB C သို့ USB C သို့ USB C PD 6ft changer tipo C CIRTOR CIRT2 ပေ 3ft စက်ရုံ
Earldom အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးရှိသော Earldom 60w အမြန်နှုန်းမြန်နှုန်းကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်အားသွင်းခြင်း USB C သို့ USB C သို့ USB C 6ft chin 6ft change tipo C CIrto C CIrto C CIrto C Creable Cable, Product Range သည်ကြွယ်ဝပြီးကွဲပြားခြားနားသည်။
iPhone iPad စက်ရုံအတွက် RJ45 Ethernet OTG ကင်မရာ adapter ကဒ် adapter ကဒ် adapter ကဒ် adapter ကဒ်ပြား
iPhone iPad စက်ရုံအတွက် RJ45 Ethernet OTG ကင်မရာ Adapter Card Reader, RJ45 Epad Camera adapter card adapter adment producter adment for adments သည်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်စျေးနှုန်းချိုသာစေနိုင်သည်။
အရည်အသွေးမြင့် ZP19 Ring Light Selfie Stick Triphed Triphe Do Tripode - Shenzhen Kaisinuo အီလက်ထရောနစ်ကုမ္ပဏီလီမိတက်
Earldom အရည်အသွေး ZP19 လက်စွပ် Light Selifie Stick Tripod လက်ကားလက်ကားကား - Shenzhen Kaisinuo အီလက်ထရောနစ်ကုမ္ပဏီလီမိတက်zp19 လက်စွပ် light selifie stickod tripod ။